WOWOW Kitchen flopet spring adala ala sprayer | Kitchenlọ Ahịa Egwuregwu Mmepe
Home / Faucets kichin / Wetuo mmiri / WOWOW Kitchen Faucet Commercial Sprayer
Ngwurugwu nickel na-agbaze mmiri isi nri kichin, igwe anaghị agba nchara, igwe ojii na mgbawa-njigide, njiri mara mma zuru oke
Igwe eji esi mmiri na kichin esi eme mmiri na-agbada sprayer 2312000
Emere ka esi ebe gboo gboo gboo maka oriri mmiri oge opupu ihe ubi. Dịka ị siri kọwa, ịrụ ọrụ na ịdịtere na ụlọ oriri na ọ isụ isụ na-achọsi ike yana akụrụngwa kichin niile dị ka mmiri na-agbada ọnụ mmiri kichin mmiri ga-arụ ọrụ kachasị. Ndị ọrụ na-eji nsị mmiri kichin a emeputa ngwa ngwa na enweghị nri ọ bụla. Ọ ga-abụ nkwụsịtụ n'ọdụ mmiri esi adọba mmiri na-adọba mmiri ga-abụ ihe mbibi. N'ihi nke a, emebela ụlọ mmiri esi mepụta ụlọ n'usoro kwekọrọ n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ kachasi elu, yana ọbụna ihe ndị na-adịgide adịgide. Na WOWOW, anyị na-ejikarị usoro nke ụlọ ọrụ dị elu, yana anyị etinyekwuru anya karịa nkwụsi ike na nnukwu mmiri nri kichin ụlọ ọrụ na-agbadata sprayer.
Ọtụtụ ndị etinyela isi mmiri ụsọ mmiri a na-eme ebe obibi. Dabere na kichin gị, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ike ịrụpụta kichin gị nke ọma. Ọ dịkarịa ala, ị maara na ịdịte nke ụlọ ọrụ kichin nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe a bụ nnukwu njedebe, arụmọrụ dị na ọkwa dị elu yana njirisi ya na-enye kichin gị aka. Dị ka foucets kichin na-ejikarị eme ihe bụ isi na-echekwa na kichin, na-enwe ọmarịcha isi nri kichin mmiri na-agbada sprayer ị ga-ejide uche niile na kichin gị. N'ihi ọdịdị ya dị ogologo, dị larịị, na nke pere mpe, akwa a na-esi esi nri kichin zuru oke maka ụdị kichin ọgbara ọhụrụ. Ya mere, udu mmiri udu mmiri a eji eme mmiri ga - ebuputa ya ga - abụ oke nkwalite ọhụụ maka kichin ọgbara ọhụrụ.
Oge opupu ihe ubi na-akwatu ebe a na-esi nri kichin
Kichin bụ ebe ị na-esi esi nri n’ụlọ gị. Nye ọtụtụ ndị esi esi nri abụghị ihe ịma aka, mana akụkụ nhicha. Dịka ị siri sie ma rie, ihicha kichin na-abụkarị ọrụ ekele. Ọ bụrụgodi na ị kpochara kichin tupu otu ụbọchị ahụ, mgbe ị risịrị nri ọ bụla, ị ga-amalite ọtụtụ ugboro. Ọ gaghị adị mma na ị ga-enwe ọ muchụ dị ukwuu na nhicha dị ka esi esi esi nri? Ọ dị mma, anyị enweghị ike ikwe nkwa na ihicha ga-abụ ọrụ kacha atọ ụtọ, mana, ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị nwere ike ịme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ karịa na mmiri idị mmiri kichin anyị na-agbada. Karịsịị, anyị nwere ike ime ka ọ dị nfe mfe iji nhicha ụlọ kichin anyị mepere emepe.
WWOWOW kichin mmiri nke WWOW Window wupu sprayer nwere otutu oru ya. Isi na-eme ka mmiri dị elu na-ewepu unyi niile na ite na ite. Ọzọkwa, mmiri mmiri a na-esi esi na kichin arụ ọrụ a na-enye ụdị iyi abụọ. Ndị na-adọkpụpụta sprayer na-enye gị ịgba mgbali elu, yana akwa mmiri a na-eji esi nri kichin na-egosipụta iyi mgbe niile. Site na nsị ya na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe mmiri nke na-agbatị, na-agbatị mgbapụta ahụ iji mee ka iru gị gbasaa nke ukwuu. Ogwe aka ndọtị na-ejide isi ịgba ahụ ka ọ ghara ịgbagharị gburugburu.
Oge opupu ihe eji esi mmiri na kichin akwusila sprayer maka iji ulo oru
E wezụga arụmọrụ ya, a na -eme mmiri opupu ihe eji esi nri nke kichin a na -emepụta ngwa ngwa. Nke mbu, ihe ndi ozo na adighi agha ndu adighi agha agha. E wezụga nke ahụ, a na-eji igwe igwe igwe rụọ valve iji chịkwaa mmiri mmiri. Ga-ahụ ihe dị iche ozugbo ozugbo ijiri ya. Ọzọkwa ejirila aka ịgba ya mee ihe maka azụmaahịa. Ihe dị iche na-atọ gị ụtọ ma i jiri ya tụnyere ụlọ e ji esi nri kichin. Dika ihe eji esi nri ime ulo a na achoghi acho ichoro izoputa ihe ndia, ebe ulo a na esi ere mmiri na ebidata sprayer the hand is Primary present. Ya mere, onweghi ihe m metere nke m mere na arụ ọrụ na anwụ ngwa ngwa ebe a na kichin mmiri.
Emere mmiri nickel kichin faucet mmiri na-agbadata sprayer
E wezụga anwụ ngwa ngwa na arụmọrụ, ụdị ahụ dịkwa oke mkpa mgbe ị họrọ ụlọ ọrụ esi esi nri kichin. Chọrọ nkewa etu esi arụ, ma ebe ị ga-esi esi nri kichin ga-abụ nkecha otu oge. Ugbo mmiri uko mmiri a mepere emepe na-ewetara gị ihe dị iche iche na-emegiderịta nke ụlọ ọrụ raw na nke mara mma. Nnukwu gburugburu na-enye akwa mmiri kichin gị ọmarịcha ụlọ ọrụ, ma mgbe ị na-eleba anya n'ụzọ zuru ezu na ebe a na-esi esi nri kichin, ị ga-ahụ ihe mepere emepe nke isi mmiri kichin. Nchikota a na-eme ka usoro a di iche na nke puru iche. Dị Mfe, mara mma ma dị egwu n'otu oge.
Igwe onu ogugu a na-acha aja aja nke kichin faucet spring wetara sprayer na-enye ihe mmecha ahụ nke ịchọrọ na kichin gị. Nkụcha a ozugbo na-enye gị kichin ọ bụla mara mma, n’agbanyeghi ụdị kichin ị họọrọ. Na mgbakwunye na ị ga-erite uru bara uru na ị gaghị ahụ mbipụta mkpịsị aka ọ bụla ruru unyi na pọpụ kichin a. Ọ dị mfe ịsacha ka edobe ya na ọkwa ọhụụ.
Ingwụnye ụsụ mmiri ọkpọ mmiri kichin wụsara ala
WOWOW kichin mmiri mmiri WOWOW na-agbada sprayer dị mfe ịwụnye. Etinyekwala gị n'ụzọ ọjọọ n'ihi ogo ọmalịcha ụlọ nri esi arụ ọrụ. Nwere ike iwunye kichin kichin a na-emepụta ngwa ngwa n'onwe gị n'enweghị enyemaka nke ọkachamara dị oke ọnụ. Igwe eji esi mmiri nke kichin a na-esi na kọmpụta na-ebute mmiri na-abịa na ihe niile ịchọrọ iji wụnye akwa mmiri kichin a, dị ka ebe a na-awụ mmiri, hoses mmiri nke igwe, na ntuziaka doro anya. Ọbụna glọọsụ bara uru gụnyere iji nye gị ahụmịhe nrụnye dị mfe yana nke dị jụụ.
Na nchịkọta, kichin mmiri ụsọ mmiri a na-ebute mmiri na-ewetara gị onyinye dị oke mma maka ego, n'ihi ogo ụlọ ọrụ ya na ọnụahịa nwere ezi uche. Ọ dị mfe ịwụnye, ọ ga-abụrịrị mgbakwunye bara uru na imebe kichin gị nke oge a. Igwe eji esi nri nke mmiri a, nke na-ebute mmiri ozuzo na-abịa na akwụkwọ ikike afọ 5 yana nkwa ego azụ ụbọchị 90. Dịka ị siri hụ, na WOWOW anyị nwere ntụkwasị obi na mmiri ụbọbọbọbọbọ mmiri anyị na-akwatu sprayer na anyị ji n'aka na ego ga-enweta gị ga-amasị gị. Ka anyi mee gi obi uto!
Uru nke isi mmiri mmiri esi esi nri ebuputara na mmiri:
· Faucet ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu
· Wunye mmiri nke nwere mmiri a na-aga azụ azụ
· Nnukwu ike
· Mara mma na nke nkọwa
· Magnetị na-egbochi ya
SKU: 2312000 Categories: Faucets kichin, Wetuo mmiri Tags: Nickel azọrọ, Faucet Kichin Sink, Single Aka Pull
30.8 x 12.6 x 3 sentimita